अत्यधिक बहुमतले चुनाव जितेका रेशम चाैधरी अस्पतालकाे बेडमा पनि फलामकाे दाम्लाेमा बाँधिएका तस्बिरहरु सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भइरहेका छन् । उनीमाथि क्रिया प्रतिक्रिया पनि आइरहेका छन् ।
रेशम चाैधरी २०५७/५८ तिर पहिलाे सामुदायिक एफएम रेडियाे सगरमाथामा ईन्द्रेणी कार्यक्रम चलाउँथे । ईन्द्रेणीमा राष्ट्रियताका गीत बजाउँथे । अलिअलि राजतन्त्रकाे पक्षमा पनि वकालत गर्थे । रेशम संगीतकार, गायक र सर्जक पनि हुन् ।
त्यतिबेलाका प्रधानसेनापति प्रज्वलसम्शेर जबराकी श्रीमती सिन्धु राणाका शब्दमा उनले धेरै गीतमा संगीत दिएका छन् । उनी प्रज्वल शम्सेरकाे धर्म छाेराे पनि दाबी गर्थे ।
‘तिम्राे पनि हैन मेराे पनि हैन याे देश हाम्राे पुर्खाकाे नासाे’ लगायत धेरै राष्ट्रियता झल्किने गीतमा उनले संगीत दिएका छन् । लाेकगीत, गाइजात्रे गीत, थारु गीतहरु पनि उनले गाएका/सृजना गरेका छन् । उनी कराँतेका राष्टिय स्तरका खेलाडी र काेच पनि हुन् । वास्तवमा उनी बहुप्रतिभाशाली व्यक्तित्व हुन् ।
एकजना डिएसपीकाे घरमा बस्दा उनकै छाेरी रञ्जिता श्रेष्ठलाई बिहे गरेका रेशम मुलुक, जनता, सीमान्तकृतकाे र श्रमजिवीकाे आवाज ओकल्ने युवा हुन् । नेपालमा एफएमकाे बाढी आएपछि टिकापुरलाई कार्यक्षेत्र बनाएर दुईओटा एफएम सञ्चालन गरेर कैलालीलाई सूचनाकाे हब बनाउनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्ने रेशमले जनतामा जागरण ल्याउन ठूलाे भूमिका खेलेका छन् । अखण्ड सुदूरपश्चिम र थारुवानबीचकाे अन्तरसंघर्षमा उनले थारुलाई राेजे ।
टिकापुर काण्ड एक विद्राेह थियाे । क्रुर, अमानवीय र पाशविक घटना भएपनि त्याे एक जनआक्राेस र जनविप्लव नै हाे । उक्त काण्डका याेजनाकारमध्ये एक रेशम पनि थिए । तर, जनताले दुईतिहाई भन्दा बढी भाेटले जिताएर जनताकाे प्रतिनिधि बनाए ।
ठिक छ अदालतले दाेषी करार गर्‍यो । सजायँ भाेगेका छन् । तर स्पाइनल कर्डकाे समस्याले थला परेका बिरामीलाई पशुझै सिक्रीले बाँधी राख्ने ? मानवता, सभ्यता, लाेकतन्त्र, गणतन्त्र अनि समाजवादभित्र याे हर्कत सुहाउँछ ? हुन त हामी बच्कना र अनविज्ञ पनि हुन सक्छाैं । यसमा अरिंगाल बन्न सकिन्न ।
झापामा सामन्तका टाउका काटिए । जनयुद्धकाे नाममा हजाराैंकाे अमानवीय हत्या वा सहादत भयाे । गाैर जस्ताे हत्याकाण्ड जसमा महिलाका संवेदनशील अंगमा भाला राेपेर कत्लेआम गरियाे । ती सबैका याेजनाकार सरकारमा छन् । रेशम चाैधरी जनताकाे गणतान्त्रिक शासनमा बिरामी हुँदा पनि सिक्रीमा ? जय हाे समाजवाद उन्मुख राज्यकाे ।